Muddama OPDO fi Shira JSM. Hin bari’u seete manatti agdee bariinaan – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsMuddama OPDO fi Shira JSM. Hin bari’u seete manatti agdee bariinaan
Muddama OPDO fi Shira JSM. Hin bari’u seete manatti agdee bariinaan
Waamicha ammaan dura OPDOn ABOtif gootee soba akka ta’e Olola isaan torbanoota kana oofa jiran irraa ka’uun tilmaamun nama hin dhibuu.Yeroo ammaa kana OPDOn muddama cimaa keessa seente jirti. Ummatni Oromo dhaaba OPDO akka jibban waan beekanif araarrii jidduu isaanitti akka hin buunef kara jalee isheetiin social media irratti olola ofsiisa jiru. walga’i caffee Oromiatti waamamee irratti immo haasa bishaan hin fuunee akka nama irribaa dammaqee jiruu afarsuun kun kara nagaatin ABO akka biyya hin seennef wal jiddutti shakkii uuma jirti. Shira kanas adda durummaa JSM akka harka keessa qabu beekamadha.
Kaayyoon isaani inni jalqaba dhaaba karaa nagaa biyya keessa taahee Ummata isaaf qabsa’u bakka lamatti addaan qoodun dadhabsiisuu dha.. Isas waan milkaa’an natti fakkaata. Sababni isaa Pr. Baqala Garba erga gara Amerika deemee achiin hafun gaaffii deebii dhabdee taate jirti. Guungummii namoota heedduu jidduuttis uuma jira. Yeroon kun yeroo filannoo itti aanuf of qophessanii Ummata ofii amansiifatanidha. Malee yeroo Biyya alaa deemani achiin afaniis miti.
Torbanota darbees Dhaabni KFO kan akka
Dr. MERARA GUDDINA
ADDISU BULLAALA gara German dhufan. Jawaris fundrise OMN waggaa 4ffaa jechun akka dhaabni KFO deggersa hin arganne danqaa uume jira. Isaaninis JSM bakka lamatti addaan isaan qoodun Dr. Merara magaala Frankfurtitti deggertoota isaa qofa walitti qabee shira hin taanee maqaa QBO tin irratti dalage. Akka isaan deggersa hin arganne taasisee ofi maallaqa gurrate. haasa waa’ee biyyatti deebi’u isaa irratti deggertonni isaa yaada faalla waan kaasanif osoo hin xumuranin dhiite bahe.
Akkasuma Magala Nurnberg ittis galmi guddaan maallaqa danuutin fuudhame namni irratti argamuu waan dideef aarii dhan dhiite bahu isaatu dubbatama. Shirri JSM dhaabbilee jaallatamoo ABO fi KFO jidduutti xaxaa jiru kun booda OPDOs akka addan diiguu beekamaa dha.
JSM fi OPDOn waliin tahun ABO fi KFO dhabamsiisuu irratti shira guddaa xaxaa akka jiran kanumaan tilmaamu dandeenya. KFOn akka isa hin shakkineef andaara uffata isaani qabatee duuka nanna’a. Kanaaf Qeerroo fi Ummatni keenya keessuma shira KFO irratti dalagamaa jiru kana dura dhaabbachu qaba.
Isaaninis bor team Pr. Baqalaa fi team Dr. Mararaa Guddina jechuuf deema. Kun tahuu hin qabu.
As keessatti Dr. ABIY AHMED dhugumaan dhaabileen alaa kara nagaatin biyyatti deebihani ummata isaani faana akka hiriiran fedhii waan qabu natti fakkata. Osoo fedhii hin qabaanne H.D ABO waliin haasawa hin taasisuun ture. ABO biyyatti deebihun Dr. Abiyin waan sodaachisuus hin qabu. Sodaa guddaa kan qabu OPDO dha.
Sababni isaa ABO haqa ummata Oromo dhugoomsuu waan barbaaduuf.
Dr. Mararaan amman duras Boordii Rift vally University tahee jedhamee Odeeffamaa ture. Amma immoo Boordii EBC tahee jedhu kunis fudhatama hin qabu. Ummatni Oromoo biyya alaa jiraniif biyya keessa jiran Dr. Mararaa waan isaan barbaadaniin bira dhaabbachu qabu.
Kunii Dr. Mararaaf dhiimmanii osoo hin taanee akka inni hojitti qabamee qabso isaatti xiyyeeffannoo hin gooneefidha.Ummata isaa keessa deeme dammaqfachuu qaba. Waajjira heedduu akka banatan nii beekna.garu waajjirri qofti banamuun bu’aa qabeessa miti. Irratti hojjechuu isaan barbaachisaa. Kanaaf immoo maallaqa isaan barbaachisa. Ummatni deggersa gochuufin dirqama keenya.
Kanaaf shirri JSM fi OPDOn dalagaa jirtu ABOn illee karaa nagaatiin akka biyyatti hin deebinee Olola mediatin irratti bantee jirti.
KFO kara tokko hojii itti kennun busy gochu duubaan immoo bakka lamatti isaan qooduun dadhabsiisuu ejjennoo godhatanii jiru.
ONN:TVOMT:Olollli sobaa kan OPDO biyyaa keessaa fii OPDO biyya alaatiin bifa qindoomina
Dabara Marqos keessatti konkolaataa Barakat Simoon gubachaa jira